Kormeerkii Waxbarshada Degmada Qardho oo si habsami leh uga socda Maalintii 2aad Goobaha Waxbarashada Magalada Qarho. – Ministry of Education in Puntland
Kormeerkii Waxbarshada Degmada Qardho oo si habsami leh uga socda Maalintii 2aad Goobaha Waxbarashada Magalada Qarho.
By editor	/ March 25, 2018
March\_25\_ 2018- Maalintii 2aad kormeerka Waxbrashada Degmada qardho oo si xowli ah ku socda ayaa saaka aroortii teamamkii shaqooyinka waxay kala aaden dugsiyada jadwalka ugu jiray oo kala aha Dugsiga sare ee Shiikh Cismaan iyo Dugsiga sare Mun’tadda Qardho.
Gudoomiyaha Waxbarashada Degmada Boosaso siciid Maxamed Faahiye iyo Gudoomiyaha Waxbarshada Gobolka Karkaar Bashiir Galari iyo qayb ka mid ah kormeerayaasha Gobolka iyo shaqaalaha dhexe ayaa howshoodii caadiga ah ka sii waday maalintii 2aas ee kormeerka.
Kormeerkaan oo ka kooban labo qeybood oo hogaaminya agaasiamah Waaxda Tayenta iyo kormeerka Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta sare C\_qaadir Yuusuf Nuux ayaa ka socda Magalada Qardho , si waaxda tayadhowrka waxbarashadu u ogaato halka ay waxbarasharadu marayso degmada Qardho.
Ujeedadda Kormeerkan ayaa ah si looga hortago shahaadooyinka iyo bedelada been-abuurka ah ee ku soo badanaya magalooyinka Waa wayn dugsiyadooda, gaar ahaan dugsiyada sare iyo kuwa dhaxe oo majo-xaabin iyo burbur ku ah tayada waxbarashada Puntland.
waxay ka shaqaynayan dhammaan Masuuliyiintan Waxbarashada Gobollada iyo Degmooyinka ,Kormeeraha Guud iyo Kormeerayaasha Gobollada , Agaasimaha Waaxda Waxbarashada Tooska ah,Madaxa Qeybyada Wasaaradda inay qaadaan tallaabooyin wadajir ah oo lagu xaqiijinayo habsami u socodka waxbarashada dugsiyada isla markaana looga hortagayo wax kasta oo hagardaamo ku ah waxbarashada.
Ujeedaddooyinka kale ee guud kormeerkaan ayaa lagu sheegay inuu yahay in kor loo qaado tayada qofeed ee ardayga iyo ujeedooyin kale oo ay kamid yihiin, Baarista ardayga booda iyo cadaynta sugnaanta bedelada, Hagaajinta maamulka dugsiyada,Cashar eegista fasalka iyo qodobo kale.